प्रचण्ड पढ्न व्यस्त, ओली समूह लेख्न ! – Mero UK
प्रचण्ड पढ्न व्यस्त, ओली समूह लेख्न !
१२ मंसिर, काठमाडौं । केही घण्टाका लागि मंसिर ५ मा धुम्बाराही जानुबाहेक दश दिनयता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुमलटारमै बिताए । निवासमै भेट्न आउनेहरुसँग कुराकानी त गरे, तर कुनै औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रम वा भेटवार्ताका लागि बाहिर निस्किएनन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार त जाँदै गएनन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिमचाहिँ यो १० दिनको अवधिमा प्रचण्डलाई जवाफी पत्र लेख्न व्यस्त रह्यो । केपी ओलीले लेखन ड्राफ्ट तयार पार्ने जिम्मेवारी आफ्नो समूहका नेताहरुलाई दिए र आफूचाहिँ जिल्ला भ्रमणका साथै सरकारी कामकाजमा सक्रिय बने ।
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको जवाफी प्रस्ताव लेख्न मंसिर ३ को सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो दश दिन समय दिएको छ । सचिवाललयले दिएको दश दिने म्याद शनिबार सकिँदैछ ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिवेदन लेखनमा आफूनिकट नेता र निजी सचिवालयलाई खटाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्देश दिने गरीका केही गतिविधिमा सक्रिय भए । उनको दौडधुप राजधानी उपत्यकाभित्र मात्र सीमित रहेन ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य संवाद गर्नेदेखि ताप्लेजुङ भ्रमणमा समेत निस्किए ।
मंसिर ६ मा भएको देउवासँगको भेटवार्ताका क्रममा देउवासँग ओलीले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेको चर्चा चल्यो । तर,
पलकी सोल्टिनी वर्षा
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा को को छन् उम्मेदवार ?